Ekwela Ka Mgbasa Ozi Gị Ghara Tta Ahụhụ Mmiri China | Martech Zone
Monday, March 15, 2010 Sunday, October 4, 2015 Bọọlụ Lorraine
Otu n'ime usoro kachasị dị irè iji mee ka ndị ọbịa Random gaa Raving Fans bụ iji "mkpọsa mkpọsa". N'ime usoro a, ị matara otu ndị ahọrọ ahọpụtara dabara n'otu igwe mmadụ, ma ọ bụ nke ka mma, kerịta otu mmasị ma zigara ha ozi. Ozi ndị a nwere ike ịbụ email, ozi olu, ozi ederede, ma ọ bụ ihu na ihu.
Mgbasa ozi dị irè na-enye ozi dị mkpa maka onye ahịa gị, na-abịa mgbe niile, mana ọ bụghị oge iwe, ma na-akpali atụmanya maka mkpebi ịzụta.
Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ, ndị nwe azụmaahịa ma ọ bụ ndị ahịa na-anụ ọkụ n'obi na-anwa imezi usoro a, site na iziga ọtụtụ ozi, n'oge na-adịghị anya, ma ọ bụ ọtụtụ mgbe. Nsonazụ ahụ? Kpọmkwem azịza ya, ebe ọ bụ na atụmanya gị agaghị ada ada, ha na-agwa gị ka ị pụọ, na-adịgide adịgide!
Dịka onye na-ere ahịa email, m na-abụkarị ezigbo ndidi, mana n'oge na-adịbeghị anya, Ratepoint gwụrụ nnabata ha. Kedu? Ọ dị mma ọ malitere n'ụzọ na-ezighi ezi, yana akwụkwọ ozi, ozi email na onyinye maka nnwale efu. Mgbe ahụ, enwere oku ekwentị mgbe m jụrụ ajụjụ ole na ole. Tupu mkparịta ụka ahụ agwụ, agwara m ha na enweghị m ike iji ngwaahịa ha n'ihi na abụ m onye na-ere ahịa Kpọtụrụ na mgbe niile ọ bụghịkwa ezi ihe kpatara m ji gbanwee.
Kama iji nkwanye ùgwù mee mba, ha kpọbatara m n'otu dị iche iche wee bụrụ atụmanya. Enwere kaadi ozi ndị ọzọ, ozi email na oku ndị ọzọ. Ka ndị ahịa ha na-ewe iwe iwe, na-achọ ịmata ihe kpatara na anaghị m arụ ọrụ ikpe m, ọ bịara siere m ike karị ma sie ike ịnọgide na-akpa agwa. (Na-eche ya ihu, M si NY na ụbọchị dị mma ọ na-esiri m ike ịnọgide na-asọpụrụ)
Ọ bụrụ na m ga-atụlerịrị ịnwale ngwaahịa ha, enweghi m ike ugbu a. Gịnị ka anyị na-amụta na ya? Marketingzụ ahịa nke ukwuu abụghị ihe dị mma. Ọ bụrụ na mmadụ egosi na ha abụghị atụmanya, hapụ ha, ma gaa n'ihu. Mmiri nwere ike ibibi ugwu, otu na-atasị n'otu oge, mana ọ gaghị akpali mmadụ ịzụta.
Tags: ntapumkpọsa mkpọdaemail Marketingakụrụngwa ahịa
Lorraine, post gi mere ka m chee echiche n’ajụjụ m tụgharịrị uche na nso nso a. Kedu ihe dị mma (n'etiti ozi) iji mee maka mkpọsa email DRIP? Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ozi mmụta iji nye. Daysbọchị 2? Daysbọchị 3? otu izu?
Ezi ajụjụ Patric,
Ọ na-amasị m ịhapụ otu izu n'etiti, mana ọ dịgasị site na otu, yana ihe ndị ọrụ gị debanyere.
Ezigbo ihe atụ bụ ProBlogger 31 ụbọchị iji ka ịde blọgụ ka mma. Ọ bụ nnukwu mmemme. M debanyere aha m na m ga-enweta email kwa ụbọchị maka ụbọchị 31. Bit ọ dị oke. Agara m n'azụ, ma ejideghị onwe m. Agbanyeghị na echekwara m ozi ịntanetị 31 niile, anaghị m agafe ihe ọmụmụ 15.
Mgbe m gụsịrị usoro ihe omume ya, ekpebiri m inye ndị na-agụ akwụkwọ m oge ka ukwuu. Na mmelite izugbe, akwụkwọ ịkpọ oku na seminarị, achọtala m ezigbo ọdịda ma ọ bụrụ na m na-eziga ihe karịrị otu kwa izu abụọ niile mana niche kachasị sie ike.
M ga-achọ ịma ihe ndị ọzọ na-achọta maka ha.